Fenoarivo Atsinanana Fiara sprinter 10 no voaroba tao anatin’ny herinandro
Fampihorohoroana eny Andavamamba Tratra ihany i Zily ny farany
Anisan’ireo jiolahy malaza ratsy sady atahoran’ny olona eny Andavamamba, lalana miditra mankany amin’ny sekoly ambony UPRIM i Zily. Sady mpanendaka mantsy izy no mpangalatra ary manao herisetra mihitsy mandritra izany ka efa nandrasan’ny mpitandro ny filaminana hatramin’ny ela.
Maroantsetra Tratra ny lehilahy mpivarotra basy
Lehilahy iray nahatrarana basy vita gasy miisa 5 no nosamborin’ ny Polisim-pirenena avy ao amin’ny CSPD Maroantsetra faran’ny herinandro teo.
Toamasina Tokantrano iray nahatrarana basy kilalao sy matraque
Manoloana ny firongatry ny fanafihana mitam-piadiana ao Toamasina dia tsy mandry andro aman’alina ireo polisy ao an-toerana mikaroka ireo jiolahy mpanao izany.
Tsiafajavona – Ambatolampy Mpiandry fonja sandoka nitarika jiolahy naka takalonaina
Notafihina andian-jiolahy mitam-piadiana ny tanàna Andranomaria Kaominina Tsiafajavona Distrika Ambatolampy Faritra Vakinakaratra, ny 21 oktobra 2020 vao mangiran-dratsy.
Ankazomanga Tratra ilay nisandoka ho mpitandro ny filaminana
Tovolahy iray nanao fanamiana mpitandro ny filaminana nitondra moto, tsy nanao aroloha fa ireny saron-tava ( cagoule ) ireny no nosakanan’ny polisy rehefa nandalo teny Ankazomanga, omaly.
Na an-tsaha, na an-tanàna Manao izay tiany ny jiolahy
Ny jiolahy no manjaka eto na ambanivohitra na an-tanàn-dehibe, manjaka ny halabotry sy ny fanafihana mitam-piadiana na an-tsaha na an-tanàna. Ny kely hanana lasa,
Bevalala Miha mahazo vahana ny fanendahana
Vehivavy mpianatra iray nanovo fahalalana ao amin’ny« Centre professionnel » an-dry mopera eny Bevalala no voendaka niaraka tamina lehilahy iray 25 taona nitondra bisikileta ny 15 oktobra teo teny akaikin’ny kianja filalaovam-baolina.
Mirongatra ny tsy fandriampahalemana any amin’ny distrikan’i Fenoarivo Atsinanana. Ireo vahiny tonga mandalo any an-toerana no tena mahita faisana amin’izany, raha ny fanazavan’ireo lasibatra.
Vao tamin’ny herinandro teo, ohatra, dia fiara sprinter miisa folo no nitondra faisana. Hafa dia hafa ny fomba fiadin’ireo mpanao ratsy. Toy ny mampiasa zavatra mantsy izy ireo ka ilay tompona fiara indray no mamoha moramora ny varavarana rehefa tonga izy ireo ary toa zary lasa manonofy tsy mahavita na inona na inona mandrapahalasan’ireo mpanao ratsy. Tovolahy kely iray avy aty an-drenivohitra mpamily sady tompon’ny fiara no lasibatra ny faran’ny herinandro ka lasan’ireo mpanao ratsy hatramin’ny kapa tsara tarehy teny an-tongony. Lasany ihany koa ny radion’ny fiara vaovao, ny panneau solaire nipetaka tamin’ilay sprinter, ny wifi, ny entan’ireo mpianatra rehetra tao anatin’ny fiara ary ny vola rehetra tany amin’ilay tovolahy. Nomarihin’izy ireo fa tovolahy iray sendra tratra alina tokony hatory ao anatin’ity fiara sprinter ity ihany koa no nambanan’ny jiolahy roa tamin’ny antsy roa teo amin’ny tendany ka tsy afa-nikofoka sady voaendaka.